Taliban iyo Miisaskii wada hadalada 2013-2020!! – Somalimirror.net
Warar Ku Salaysan Xaqiiq iyo Xuuraansi
Dhageyso Diiradda Jimcaha Iyo Dhaqaala Darrida Heysata DF. Somalia miyaa xor ah 62 sano ?
Taliban iyo Miisaskii wada hadalada 2013-2020!!
Xarakaatkii Islaamiga ee wadahadalada galay, Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka intaba, kuma liibanaanin oo dhinac kale ayaa guusha la tagey sababtuna waxay ahayd inay saxiixeen heshiisyo bilow u ahaa burburkooda. Laga soo bilaabo Somaligalbeed ilaa Filibiinta Koonfureed tusaalahaas ayaa ka muuqda, oo arintu waxayba gaartay heer laga sii dido wada-hadalada oo loo arko inay yihiin faq reergalbeedku wato oo aan natiijo iijaabi ah marnaba laga gaareyn ilaa laga soo gaaro Taliban iyo 2020 oo markii ugu horeysay namuudaj u noqotay Xarako islaami ah oo gashay heshiis ay gacanta sare iyadu leedahay. Qorayaasha iyo cilmi baarayaasha Islaamiga waxaa la gudboon inay baaraan farqiga si darsi iyo cibar looga qaato.
Waxaan Akhriyey Kitaabka Xajarul Ard – Siraacul Ghuzaati wal xumaati fii Afghanistan- ee uu qoray Saxafiga Muritaaniyaanka ah ee Axmad Faaludiin, wuxuu soo guurinayaa dhinac ka mid ah laxadaatkii ugu adkaa ee wadahadaladii Taliban iyo Mareykanka isagoo soo xiganaya ku xigeenkii mas’uulka maktabka siyaasiga ee Taliban oo leh:
“Intii wada hadalku socday, Americanka ayaa isku dayey inay nagu cadaadiyaan inaan aqbalo arimo aan diidnay, markii ay ka quusteen cadaadiska ayaa sarkaal American ah ku qeyliyey “haddii aad dooneysaan inay ciidankeena ka baxo wadankiina waa inaad aqbashaan qodobadan, haddii kale, 20 sano oo dheeraad ah baan sii joogi doonaa.
Wuxuu adeegsaday warqadiisii ugu dambeysay, ujeedkuna wuxuu ahaa in la cabsi geliyo oo ay soo debcaan, laakiin mas’uulkii Afghaniga ayaa wuxuu leeyahay, Anagana intaan xanaaqay, oo miiska garaacay, baan ku dhahay: “20 sano oo kaliya ma ahane, 100 sano oo dheeraada sii jooga, waxay idinka dhamaan doontaa idinkoo cagaha ka gubanaya oo cadaadbta dagaalka kujira. Americankii meeshuu istaagay, ayaa loo sii afar jibbaaray, qisas noocan ah oo aad ka dareemeyso mawaaqifta cizziga ee Taliban istaagtay ayaad ka buuxa kitaabka, waadna dareemeysaa in saacadna aysan xarakadu madaxa raaricin intii wada hadalku socday.
Intaan Akhrinayey kitaabka, waxaan ku fikirayey waxa Taliban uga dawaneyd Xarakaatkii hore, waxaan ii soo baxay dhowr arimood:
1- Waxay wada hadalka furtay iyadoo taagan موقع القوة oo warkeeda la maqli karo, ra’yigeedana la dhageysan karo kuna jirta xilliyadii ay ugu awoodda badnaa jiritaankeeda taas oo ka duwan xarakaatkii hore, kuwaas oo marka ay daadaalaan oo kaliya soo fariisan jiray miisaska wada hadalka, kolkaas oo wax walba YES SIR, YES SIR ku soo dhamaan jiray.
2- Inay wada hadalka la furtay ciddii ay quseysay balse aanan lagu cadaadin inay la fariisato dabadhilifyada Mareykanka. Mareykanku wuxuu isku dayey bilowgii wada hadalka inuu isku keeno xukuumada Kabul iyo Taliban, Laakiin Xarakada ayaa diiday inay la fariisato nidaamka Kabul, waxay tiri waa nidaam Mafcuul ah ee faacil ma ahan.
3- Ma jirin ururo, ama dowlado kale oo galaangal ku lahaa go’aanadooda, sida laga dheehan karo safxada aan soo sawiray tan ku xigta, halkaas oo madaxda Taliban qirayaan in mas’uuliyiin Sacuudiyaan ah, kuwa Pakistan ah iyo kuwa Imaaraat ah isku dayeen inay wada hadalkooda weji uga sameystaan Mareykanka balse ay ka diideen.
4- In cadowgooda aysan marnaba u muujin wax yar oo ah rabitaan iyo xiiso ay u qabaan inuu dagaalku soo dhamaado, sidaas darted Taliban wey diiday in wax xabad joojin ah la sameeyo 7 sano ee wada hadalku tooska u socday.
5- Inay ka faa’ideysatay niqaad dacfiga cadowgooda, iyaduna niqaad dacfigeeda qarsatay oo aysan miisaska lasoo fariisan.
Tajrubadan muhiimka ah, awood iyo aqoon aan ku taxliiliyo ma hayo laakiin waxaan intaan usoo xariiqay boorin iyo soo jeedin ku socoto qorayaasha iyo cilmi-baarayaasha Islaamiga si ay wax badan u akhriyaan una diraaseeyaan Asbaabta guusha Taliban,siiba qeybta wada hadalada.
Inaan qirno guushooda waa Sheey, iyo inaan ka hadalno hadda gudahooda maxaa u saxan maxaase ka qaribanna waa sheey kale. Ku nac ama ku jecloow, Taliban wey ka guuleysatay Mareykanka meelwaliba. Washington Post waxay tiri: “Taliban oo Mareykanka ku jebisay miisaska wada hadalada sida ay ugu jebisay fagaaraha dagaalka.
W/Q: warfaafiye Kurtun Xasan
Previous PostSouth African President CyrilRamaphosa allegedly kept large sums of money in foreign currency at his farm
Next PostUS Troops Ambushed In Somalia, Followed By Airstrikes
Koowda Luuliyo 62 Sano Kadib 1960-kii Soomaaliya oo Gummeysi dhax muquuranaysa [Warbixin].
Akhriso: Fadliga ay leeyihiin Tobanka maalmood Ee Bisha Carafo.
Sawirro: Horumar dhanka Wax soo saarka beeraha ah oo ka jira degmada Saakow.
Dhageyso Diiradda Jimcaha Iyo Dhaqaala Darrida Heysata DF.
Somalia miyaa xor ah 62 sano ?
Ethiopia’s PM Abiy Ahmed calls for restraint and end to hostilities with Sudan,